WWW.FIDULINK.COM > Legal Mentions
FIDULINK.com dia masoivohon'ny fampidirana eo an-toerana anao manokana famoronana orinasa an-tserasera any amin'ny firenena 193.
FIDULINK® Côte d'Ivoire
FIDULINK® Afrika atsimo
Tadiavo ireo Agents eo an-toerana rehetra ao Afrique , Amérique , Asie , Eoropa , Oseania > ETO
Ho an'ny fangatahana rehetra amin'ny alàlan'ny mailaka: Mifandraisa [@] fidulink.com
Fananana angon-drakitra manokana:
Ny angon-drakitra manokana voangona dia natao hampiasaina amin'ny orinasa. Ny angon-drakinao manokana dia tsy maintsy ampiasaina aminao mba hifandraisana aminao raha hamaly ny fanontanianao. Tsy maintsy amidy, zaraina na ampahafantarina amin'ireo ankolafy ny angon-drakinao manokana.
Ny singa rehetra (ny lahatsoratra, ny sary, ny horonan-tsary, ny feo, ny anarana, ny logo, ny marika, ny tahiry, sns.) Ary ny vavahadin-tseranan'izy ireo ihany koa, dia iharan'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'ny mpamorona sy ny Zo mifandraika amin'ny zon'ny mpamorona. Ity tranokala ity dia napetraka tao amin'ny vavahady fiarovana ny zon'ny mpamorona.
Ny tranonkala iray manontolo sy ny atiny azo sintonina dia fananan'ny orinasa manokana. Tsy misy fanahafana na solontena, na ampahany aza, azo ekena raha tsy nahazo alalana an-tsoratra avy amin'ny mpampanonta ny tranokala.
Izay fampiasana tsy nahazoana alàlana an-kolaka dia mety hitranga amin'ny andraikitry ny mpanoratra sy / na heloka ataon'ny mpanoratra. Ny orinasa dia manana zo hanao fanafody ara-dalàna amin'ireo izay mandika ny zony.
Ireo fepetra ankapobeny ireo dia iharan'ny lalàna momba ny fananana ara-tsaina, ary any ivelany amin'ny alàlan'ny fivoriambe iraisam-pirenena mampihatra ny zon'ny mpamorona, izay mamaritra, isaky ny tranga tsirairay, ny lalàna azo ampiharina.
FIDULINK® dia mari-barotra, tranokala sy sehatra, vahaolana IT, tambajotra dia fananan'ny orinasa SUXYS® LLC, birao foibe: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Etazonia amerikanina - Operatera ho an'ny FIDULINK®: SUXYS Ltd, Office ofisialy: 20 Wenlock Road, N17GU, London, United Kingdom - Hosting & Technology for FIDULINK®: TEKNOLOGY SUXYS OU, Birao foibe: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10151, Estonia - Mitazona & Fiduciary ho an'ny FIDULINK®: SUXYS INTERNATIONAL Limited, Birao foibe: Burlington Tower, Business Bay Dubai PO Box 487644 Emira Arabo Mitambatra - FIDULINK® Fahazoan-dàlana hampiasaina, hanofa, hampiasa ary hampisehoana ary hitrandrahana ny marika navoakan'ny SUXYS LLC: FIDUXX01. Sary nahazoan-trosa: Shutterstock - SUXYS LLC